Iqela lakho leMixx alivulelekanga kubabhalisi bakho. Ndicofe ikhonkco lakho ukujoyina kwaye ndafumana lo myalezo:
“Yhuu! Kukho undonakele.
Pssst: Awukamenywanga kweli qela, hayi, awukwazi ukuyenza loo nto. Kodwa buza kakuhle mhlawumbi baya kukuvumela ukuba ungene. Okanye ziqalele elakho iqela!”
Ngelishwa, i-Mixx ayiboneleli 'ngamaqela avulekileyo' (ngoko ndikwaziyo!). Ukuba uyathanda, sebenzisa ifom yam yoqhagamshelwano kwaye undithumelele idilesi ye-imeyile kwaye ndiza kukuphosela isimemo!
Kuvakala ngathi 'kwi-mediasnacks' yonke indawo 😉
Ukuba yonke into ihamba kancinci, kwaye kuya kufuneka ndivume ukuba le nto uyithethayo iyinyani ke njengabantu ngabanye siya kuba yinxalenye yeencoko ezincinci, njengaxa ukwitheko elikhulu kwaye uthetha nabantu aba-5 okanye abali-10 ubusuku bonke.
Ekugqibeleni siya kufuna indlela entle yokufumanisa ngala maqela njengawo wonke umntu ngandlel’ ithile wafumanisa ngoFacebook walo nyaka.
Enye yeengxaki zokwenyani endizibonileyo kwaye ndazama ukuhambisana nalo nyaka ibe lutshintsho olukhulu kwaye bekunzima kangakanani ukuqhubeka. Ndifumanise ukuba ndifunda ngetekhnoloji entsha kubantu abanje nge-Scoble ngokufunda i-RSS feeds kwisifundi sam sikaGoogle kodwa kulula kakhulu ukuba itekhnoloji enkulu iphoswe ngaphandle kokuba umntu ongenguye u-Arrington uyasinceda ukuba siqhubeke nento emayibukele.
Dec 27, 2007 ngo-12:52 PM
Hey, enkosi ndoda ngokukhankanya. Andifuni nakancinci ukunciphisa ixabiso leposti yakho uyazi. Unyanisile emalini njengokuba ndixhalabile. Mhlawumbi into echubekileyo ibikukuthetha apha kuqala, nangona oko bekuya kuba “kukungena” kakhulu mhlawumbi. Ndonwabile ukufunda iposi yakho nangona kunjalo. Masinwabe.
Dec 27, 2007 ngo-2:52 PM
Akukho maxhala, Nil! Uveze inqaku elikhulu. Ndikhe ndajonga ividiyo ndade ndafunda uluvo lwakho-kwaye ubunyanisile!
Dec 27, 2007 ngo-3:46 PM
Enye yezinto ezihlala zikhanga kum kwithekhnoloji nakwimithombo yeendaba entsha kukukwazi ukudibanisa izinto kunye nokudala izinto ezintsha, ezinomdla (Uxolo, awukwazi ukucinga ngegama elingcono kunalo ngoku.) Kodwa ininzi yale nto. Izinto ziba yi-ad hoc kangangokuba bambalwa abakhanyisiweyo abaziyo ngobukho bayo. Ndicinga ngakumbi ngezinto ezinjengee-hashtag kuTwitter. Ukuze konke oku kuhamba kancinci kube nempembelelo, kufuneka kubekho uhlobo oluthile lohlobo lomthi wefowuni ukusasaza iindaba kumarhamente kuba - masijongane nayo - bambalwa kakhulu abantu abayaziyo ukuba yintoni iRSS, bayeke babhalise. kuzo zonke izidlo ezibalulekileyo kwaye uhluze kuzo zonke.
Okokugqibela, ingxabano yam kukuba uninzi lwamathuba okuthengisa abantu abawabonayo kwi-microblogging nakwimithombo yeendaba eziphathwayo kwaye zonke ezinye luhlobo lwezinto abantu abanjengam abaya kukhwaza ukuba babaleke kuzo. Andiwuchasanga ingcinga nganye kodwa kufuneka - kwaye inyanzelekile - kucace, iindlela ezilula zokulawula kunye nokulawula ukuba amava anjani kum. Ndicinga ukuba iprojekthi efana ne-OAuth kunye ne-OpenID ihamba indlela ende ekuququzeleleni olu hlobo lwento kodwa ndicinga ukuba usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe ukukhusela abantu. Njengoko ihlabathi lihamba kancinci, indawo abathe bangena kuyo abathengisi iya ikhula ibe yeyomntu. Kwaye andithathi ngobubele kakhulu ukuba indawo yam yobuqu ihlaselwe. Ukuba ndikumema ungene, kulungile. Kodwa ke ukuba ndikucela ukuba uhambe, phuma okanye ndikukhuphe.
Yi-$.02 yam nje leyo.
Dec 27, 2007 ngo-5:14 PM
Lixabiso lenikeli noko, Jamie 😉
Ndicinga ukuba ubethelele izinto ezimbini… okokuqala itekhnoloji iyavela kwaye indaleko yinto elungileyo. Inqaku lesibini olenzayo lelo sizathu kanye sokuba sifuna i-mediums ezilungelelanisiweyo. Ukuba ndinemveliso okanye inkonzo onokuthi ube nomdla kuyo, ungakuvuyela ukufumanisa ngayo (ngamazwi akho) njengoko undimemile ukuba ndingene.
Ukufumana itekhnoloji ezisa imveliso okanye inkonzo kumntu olindelekileyo okhangela okanye iimfuno loo mveliso okanye inkonzo yile nto siyilandelayo. Into yokugqibela endifuna ukuyenza kukuba a) ndimoshe imali yam kwintengiso engafikeleli emntwini ofanelekileyo kwaye b) ukucaphukisa abantu abafana nawe ngokuyibeka ebusweni bakho xa ungayicelanga.
Ndichulumancile ngendaleko kwitekhnoloji eza kuqhubeka ukuzisa imarike kunye! Ngethemba ukuba asibacaphukisi abantu abafana nawe ngelixa sicinga. 🙂
Ngalo lonke ulwazi olukhoyo kwiwebhu, kuya kufuneka sihluze ukuze sikwazi ukwenza intsingiselo yayo. Enye yeendlela ezilungileyo zokucoca kukwenza i-niche okanye ngamanye amagama ukwenza i-micro community okanye inguqulelo yolwazi. Ndivumelana ngokupheleleyo noqikelelo lwakho.
Enkosi kwesi sithuba. Ndiyavuma ukuba iMicro inawo amandla. Ngoba? Kuba kulula ukwenza. Abantu abalindelanga ukuba ubhale ibali eliphezulu elinesiqalo esihle, umbindi kunye nesiphelo. Kwaye kulula ukuyisebenzisa, ngcono: 'brawuza'. Masinwabe.
Bendizibuza ukuba ingaba ukhona na umntu onokundinceda. Ndikhangela owona mba mkhulu wangoku kwintengiso enxulumene nobuchwephesha…naziphi na iingcebiso ziyakuthakazelelwa kakhulu…